Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Victoria oo loo qabtey aqoon-kororsigii cinwaankiisu ahaa Dhul Somaaliyeed ama Dhaxal Xabashiyeed
Jaaliyada Victoria oo loo qabtey aqoon-kororsigii cinwaankiisu ahaa Dhul Somaaliyeed ama Dhaxal Xabashiyeed
Shaley oo ay aheyd maalin axad ah 16 Feb 2014 ayaa waxa si aad uweyn ay bulshada Ogadeniya iyo Somaliya uga soo qeyb galeen seminar ama tababar cilmiyeed ku wajahnaa Ogadenia amaba guud ahaan Somaliya.
Waxa lagu bilaabay seminarka ayado Quraan ah, ayadoo markastaba lagama maarmaan tahay in Ilaahay xusidiisa la cuskado. Kadib waxa sitoos ah loogu wareejiyay microphone ka soo jeediyaha seminarka mudane Shugri Shafeec.
Runtii waxa uu aha seminar aad iyo ay dhamaan bulshada ka soo qeyb gashey oo la dhaceen, waxana si aan madoow ku jirin loo cadeeyay la isagana makhraati kacay hadafka iyo halka ay tiigsaneyso dawlada Ethiopia kana damacsantahay geeska Africa gaar ahaan dhulka ay sharci la’aanta ku heysate ee Ogadenia.
Aqoonta laga faa’iidey tababarkan ayaa waxeey aheeyd cilmi loo baahnaa in laga barto wadanka ethiopia khaasatan qodobo ka mid ah dastuurka uyaalla wadankaasi Ethiopia ee militariga ku saleeysan, sida is dhax galka qowmiyadaha iyo in ay dawlada Ethiopia kaliya leedahay dhulka iyo kheyraadka ku jiraba oo shacabka xilligi la doono lagala wareegi karo.
Waxa kaloo lagu soo qaadaa dhigay aqoon kororsigan oo xusid mudan in dawlad ku sheegta Ethiopia ku talo jirto mustaqbalka dajinta qowmiyadaha kale ee dagan isla wadanka ee goboladooda buux dhaafiyay kuna daad gureeyn doonto Ogadenia.
Gaba gabadii aqoon kororsigan xiisaha badan ayaa waxaa uu noqonayaa mid cilmiga laga faa’iiday uu yahay dhaxal gal, cadeeymo badana lagu soo bandhigay uuna ahaa xaqiiqad ka qarsooneyd badanaa bulshooyinkii sida sharafta leh ooga soo qeyb galey. Waxan rajeyneynaa in lagu qabto seminaarkan iyo kuwa kale oo lamid ahba dhaman wadamada ay ku suganyihiin umada Somaliyeed iyo Walalahooda Ogadeniya lagu gumaado.